ISTICMAALKA TINCTURE PROPOLIS ON KHAMRIGA CUDURADA, TILMAAMAHA - PROPOLIS
Ugu Weyn Ee Propolis
Isticmaalka tincture propolis ee cudurada kala duwan
Bees soo saaraan ma aha oo kaliya malab, laakiin sidoo kale sida wax soo saarka waxtar leh sida propolis. Propolis waa walax rasmi ah oo midabka jaalaha ah. Iyadoo ay, shinni ku dhaco noolaha noolaha, jeermiska malabyada, buuxi godadka aan loo baahnayn ee finan.
Iyadoo caawimida qalab gaar ah, beekeepers ururiyaan propolis ka soo dusha sare ee malab iyo derbiyada finan. Dadku waxay ogaadeen in isticmaalka walaxdani ay saameyn ku leedahay caafimaadka, sidaa darteed waxay daawooyin u sameeyaan noocyo kala duwan. Foomka qiyaasta ugu caansan waa tincture propolis, laga helay by ku adkayn khamriga.
Sida daroogooyinka intooda badan, tincture propolis ayaa ka horjeeda:
dulqaadka shakhsiyeed ee loo yaqaan propolis;
xanuunka loo yaqaan 'pancreatitis';
cudurrada faafa ee wadnaha;
Waa muhiim! Tincture propolis laguma talin dadka oo waligood la kulmay dareen-celin xasaasiyadeed oo alaabta shinni ah. Haddii ka dib qaadashada tincture alkolada calaamadaha calaamadaha sida casaanka maqaarka, cuncun, barar, duuf, iyo qufac muuqda, jooji qaadashada oo dhakhso ula tasho dhakhtar.
Wixii ujeedo iyo sida loo isticmaalo tincture propolis ee khamriga, waxaad u baahan tahay inaad fahamto inta aan bilaabin daaweynta. Ka dib oo dhan, codsiga saxda ah wuu bogsiin karaa, iyo caqli-la'aanta - ee liddi ku ah, waxay sii xumayn kartaa xaaladda caafimaadka.
Marka qaadashada tincture
Sababtoo ah xaqiiqda ah in tincture uu leeyahay shahaadada, dadka waaweyn oo kaliya ku qaadi kartaa gudaha. Carruurta da'doodu ka yar tahay 12 sano, isticmaalka dibadda ayaa lagula talinayaa haddii loo baahdo. Carruurta da'doodu tahay 12 jir waxay ka dhigi karaan tincture caano la kariyey, ku dar malab iyo gabal subag. Faleetadani waxaa la siiyaa ilmaha habeenkii.
Qufac iyo boronkiito
Tincture propolis daaweynaya cuduro kala duwan, laga bilaabo waxa iyo sida loo qaato - kiisaska kala duwan qorsheha gaarka ah ee arjiga.
Qufac iyo boronkiitada ayaa si aad ah loogu daaweyn karaa tincture propolis khamriga. Si dhammaadka this, cabto tincture 2-3 jeer maalintii.
Qiyaasta: 10 dhibcood oo tincture lagu qasi jiray nus koob oo biyo ah. Waxaad u baahan tahay inaad qaadato daawadan nus saac ka hor cuntada, ama badh ilaa laba saacadood cuntada kadib.
Sidoo kale haddii ay dhacdo in boronkiitka neefta leh leh tincture propolis waa mid aad u wanaagsan.. Foomkan oo ku jira xaalad ciriiri leh, saliidaha lagama maarmaanka ah iyo walxaha dabacsan ee propolis ayaa hoos u sii galaya qiiqa dabka. Habeen si fiican loo dhameeyo oo la cadaadiyo tincture propolis kaa caawin doona inaad qaba boronkiit. Wixii emerilladaas oo lagu qasi karo alkoolka.
Ma taqaanaa? Haddii qofku aanu lahayn xasaasiyad xasaasiyadeed malab, markaa suurtogalnimada propolis waxay sidoo kale keeni kartaa xasaasiyad. Laakiin si aan waxyeello lahayn, waxaa fiican inaad bilowdo codsiga qiyaasta ugu yar.
Hargab iyo qabow
Xanuun iyo hargab, waa caado ah in lagu daro tincture propolis tilmaanta caano iyo qaadan sida sida. 20-30 dhibcood oo tincture ah ayaa lagu durayaa caanaha, waxaana la qaadi karaa 3 jeer maalintii hal saac ka hor cuntada.
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa neefsasho leh propolis. Si arrintan loo sameeyo, waxaad samayn kartaa faleebo caano leh, oo laba jajab ku neefsato, kadibna u cab oo si diirran u duub.
Haddii sanka duufanu soo baxo, waxaad sanbari kartaa sanka. Tani, a qaado oo tincture waxaa lagu qasi jiray galaas biyo ah.
Xanuunta dhuunta, waxay waxtar u leedahay qashinka propolis qiyaasta hal qaado oo ah tincture halkii koob oo biyo diiran 2-3 jeer maalintii.
Marka propolis qumbaha quustay caawisaa. Habeenkii waxaad ku qaadan kartaa dhabanka. Qiyaasta maalinlaha ah ma aha wax ka badan 5 g. Neefsashada sidoo kale waxay caawisaa.
Xaalad qotodheer Waxaad saliidayn kartaa caarada 20% tincture of propolis, kaas oo lagu qasi jiray malab iyo biyo.
Laga soo bilaabo angina daran ugu caawinta ugu wanaagsan ee khamriga tincture ee propolis. U qaado sida ay tahay qorshaha: 1 qaado oo 3 jeer ah maalintii 5 maalmood.
Qumanka qumanka waxaa lagu daaweeyaa tincture bacda qafiif ah ee propolis, kaas oo lagu soo ururiyey afka isla markaana lagu dhaweeyay qummanka muddo yar. Tani waxay gacan ka geysataa boogaha nalalka daahirsan. Nidaamkan waxaa lagu soo celin karaa 2-dii saacadoodba mar, kadibna dhowr maalmood ka dib waa in ay noqdaan gargaar weyn.
Isku dhufashada tincture propolis waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta angina.
Ma taqaanaa? Cadaadiska leh propolis waxaa lagu dabaqi karaa foomka qalalan. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa propolis saafi ah, oo lagu dubay keeg. Foomkan waxaa lagu kululeynayaa oo loo adeegsadaa sida cadaadiska.
Tincture tincture leh hodan leh maaddooyin wax ku ool ah ayaa si fiican uga caawiya kaadida. Tincture alkolada waxaa lagu qasi karaa malab kala badh oo dhegta ku dhegta dhegta oo leh dhawr dhibcood 1 mar maalintii.
Marka finanku la sii daayo sababta oo ah caabuq dhegeysiga dhexe ah, suufka daboolka ah waxaa lagu qallajiyey 20% tincture tincture lagu galin karo galka dhegta.
Sidoo kale dhagta dhuunta, waxaad ku dari kartaa calafka dabka, oo lagu qasi karo emulsion of 10% tincture of propolis iyo saliid saytuun. Nidaamkan waxaa la sameyn karaa 15 illaa 20 maalmood, oo daaweynaya daawada 3 saacadood.
Sanka oo dhan iyo sinusitis
Si loo daweeyo rhinitis, waxaad diyaarin kartaa isku dar ah ee propolis, subag iyo saliid gabbaldayaha. Qiyaasta ayaa la qaadaa 1: 2: 2. Isku-darka daawooyinka ee la helay ayaa saliidayn kara sankuubyada dhexdiisa, jiifiso taakulada sanka.
Sidoo kale, marka madaxa qabowga iyo sinusitis-ka la gashado sanka oo leh 20% faleebo augus ah ee propolis 5 dhibcood. Biyoolada saliidda ee propolis ayaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta sambaboolada.
Laakiin tincture tufaax khamriga ah ee loogu talagay in sanka la geliyo sanka waa mamnuuc. Waxay dhaawici kartaa xuubka xabka ee naasofarnx. Maqaarka ku jira kiiskan waa la qalajiyey, waxaa jira raaxo la'aan, maqaarka sanka laga yaabo in uu bilaabo inuu ciribtiro.
Sifooyinka bogsashada ee propolis waxaa loo isticmaalaa ginecology ee cudurrada iyo cudurrada kale. Waxyaabaha ka hortagga dabaysha ee ka hortagaya waxay gacan ka geystaan ​​daaweynta waxtar leh ee cudurrada dumarka.
Si daaweynta cayayaanka loo baahan yahay si loo diyaariyo tincture soo socda: 15 g of propolis waxaa lagu daraa 500 ml vodka. Halabuurka soo baxay ayaa si fiican u ruxmay, kuna adkaysta 2 maalmood, ka dib markaad dalban karto.
Tincture propolis leh cadaadis ah ayaa hor istaagaya koritaanka iyo dhalmo ee fangaska. Waxaad u isticmaali kartaa qaab-qaboojinta - 3 qaado oo tincture ah oo ku jirta hal koob oo biyo nadiifa ah. Isticmaalka xargaha shimbiraha ee dhowr maalmood gudahood ayaa yareyn doona fungus kaas oo keena cayayaanka.
Codso daawada tincture alkolada loogu talagalay daweynta boogaha caloosha iyo duodenal. Si arrintan loo sameeyo, diyaariso faleebo: 40 g of propolis yaryar la jarjarey, ku shub 100 ml oo 70% khamriga. Isku darka ayaa loo rogaa 3 maalmood, qeybta hore ee nuska ah ee dhalada leh qashinka leh waa in si wanaagsan loo ruxruxo.
Tincture tincture ee boogta ayaa leh tilmaamaha sida isticmaalka hadal ahaan: Qaado 20 maalmood oo afka ah 20 rodos oo tincture 3 jeer maalintii hal saac ka hor cuntada.
Dhaawaca nabarka iyo saarista finanka
Tincture tincture on khamrigu leeyahay hanti-dumis xoog leh in, marka la isticmaalo dibedda, waxay ka caawisaa ka saar finan iyo kor u bogsashada nabarrada.
Daaweynta finanka waxaa lagu dabaqaa 15% bacriminta propolis, sidoo kale waxay ka caawisaa bogsashada dhaawacyada, ka soo baxa qallaylka, oo leh caabuq indhaha.
30% tincture tincture waxay ka nadiifin finanku adigoo ku xoqaya meelo dhibaato ah illaa 3 jeer maalintii.
Marka laga soo tago ujeedooyinka caafimaadka, propolis waxaa loo isticmaalaa kondomoole. Propolis waxaa loo isticmaalaa in la joojiyo timaha lumiska oo dib u bilaabo kobcintooda.
Wixii saliida dabacsan, waxaad isticmaali kartaa tincture ee foomka saafi. Tani waxay gacan ka gaysan doontaa caadaynta gobolka. Koorsada waxaa la samayn karaa bil gudaheed, ka dib marka fasax laga qaato 2-3 toddobaad oo la sameeyo iyo daaweynta lagu celiyo (haddii loo baahdo).
Wanaajinta iyo xoojinta timaha, waxaad sameyn kartaa xalka daciifka ah - 2 koob oo biyo ah iyo 2 qaado oo tincture ah. Halabadani waa timo la dhaqday ka dib markii la dhaqo. Sidoo kale, tincture waxaa lagu dari karaa maaskaro ka soo ukunta iyo saliid-ku saleysan.
Propolis waa daaweyn caalami ah oo sidoo kale ka caawisa ciddida feeraska. Arjiga koowaad ee aag aan caafimaad qabin ayaa horay usii kordhiyay cuncunka iyo xanaaqa. Faafin dheeraad ah ee fangaska si meelo caafimaad leh waa la xannibayaa.
Mabda'a ficilka fangaska waa awooda lagu burburin karo qaab-dhismeedka cudurka keena gudaha. 20% tincture alkolada waxaa lagu daboolaa suufka iyo codsiga fungus-ta saamaysay. Xoogta cadaadiska oo xiro ilaa 24 saacadood ama ilaa qalal, ka dibna ku celi qalliinka.
Codsiga ka hortagga
Tincture Propolis wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh waxayna kaa caawin kartaa inaad la qabsato dhibaatooyin caafimaad oo badan. Soo dhoweynta iyo isticmaalka waa suurtogal in cudurku uu jiro, iyo ka hortagga dhibaatooyinka. Wixii ka hortagga tincture propolis waxaa loo isticmaalaa xaaladaha soo socda:
kor u kicinta guud ee jirka;
Cuntada oo kordhay;
Tincture of propolis ee propolis ayaa awood u leh inay joojiyaan dhalmo ee bakteeriyada kala duwan, wuxuu leeyahay firfircoonida antiviral iyo waa antibiotic dabiiciga ah. Inta lagu jiro faafitaanka hargabka iyo kahortagga hargabka ee propolis waxay ka badbaadin kartaa jirrada cudurka.
Waxaan qaadan karaa tincture propolis inta lagu guda jiro uurka
Xilliga uurka, jirka dumarku wuxuu u baahan yahay fitamiino iyo macdano tiro badan. Tani waxay ka caawin kartaa soo dhaweynta propolis. Hase yeeshee, waa lagama maarmaan inaad kala tashato dhakhtarkaaga arrintan.. Sidoo kale waa mid u qalantaa xusuusta shakhsiyaadka dulmanaanta iyo xasaasiyadda.
Dhakhtar kasta ma siin doono suufka soo dhaweynta propolis xilliga uurka. Tani waxay sabab u tahay la'aanta aqoonta saameynta jidhka ilmaha ee propolis. Waxaa sidoo kale jira halis xasaasiyad, taas oo aad u halis u ah hooyada iyo ilmaha labadaba. Haddii dhakhtarku aanu arag wax sabab ah oo looga hortago isticmaalka propolis xilliga uurka, qaabka loo isticmaali karo hadal ahaan waa aalado augus ah, laakiin ma aha aalkolo.
Waa muhiim! Xilliga uurka, waa inaad si taxadar leh u isticmaashaa isticmaalka daroogooyinka kala duwan. Gaar ahaan markay ku dhacdo xasaasiyadaha macquulka ah. Marmarka qaarkood waxay ka fiicantahay inaad diiddo isticmaalka daroogada si aanad uga hortagin dhacdooyinka diidmada jirka.
Kaabashka sii kordhaya
Wax-soosaarkooda ballaaran iyo midhaha dhadhan fiican leh ayaa siin doona noocyo kala duwan oo geedo tufaax ah "Youth"
Yari xilliga barbariga ah "Pink King" - Tilmaamaha kala duwan iyo sifooyinka
Quruxda iyo sharafka gobolka Volga - tufaax Anis Scarlet
Tincture peppermint, isticmaali daawada dhaqameed
Geed cajiib ah Amorphophallus: shuruucda daryeelka
Sawir gacmeedka Wonder
Goobidda iyo dayactirka berrinka bannaan
Orchid ma si buuxda u kori doono oo ubaxi doona iyada oo aan daryeel lahayn. Marka lagu daro waraabinta, iftiinka iyo heerkulka, waxaa muhiim ah in si haboon oo waqtigu u quudiyo ubaxa, gaar ahaan fitamiinada. Thanks to iyaga, dhirta ma helin cunto kaliya, laakiin sidoo kale waxay dhaqaajisaa difaaca ay si adag u istaagaan cudurrada iyo cayayaanka. Read More
Maxay yihiin dheriyada for orchids, sababta ay u baahan yihiin, sida loo doorto oo naftaada u samee?
Abuurka Aaladda "Fairy Talale": sifooyinka iyo tiknoolojiga beeraha ee beerashada
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Propolis 2019